“Ilaahay ha u naxariisto” – Kaasho Maanka
Waxaa la sheega in oday kamid ah Soomaalida geelleyda ah wiil uu dhalay uu jirro ama xanuun ugu dhintay deegaan aan kiisii ahayn. Odaygii geel jiraha ahaa warkii baa soo gaadhey, warankiisuna hore qaatay isagoo go’aansaday inuu u aaro wiilkiisa.
Markuu soo gaadhey goobtii wiilkiisu Ku dhintay, dadkii waxay Ku boobeen tacsi dhegihiisa waxaa ka batay ereyga “Illaahay ha u naxariisto” odaygu weligii ma maqal ereyga “Illaahay” wax loola jeedona garan maayo, isaga se waxay kaga dhegtey waydiinta ah yaa diley wiilkaygii hebel? Dadkuna waxay ugu jawaabaan Illaahay baa diley oo tiisi bay noqotay, waxayna u raaciyaan Illaahay ha u naxariisto.
Duqii yaab!!!!!. Waxa la sheegeya isu qaban waaye, Illaahay baa diley oo aanu aqoon, hadana ha loo baryo inuu u naxariisto. Yaab iyo af-kala qaad bay Ku noqotay. Hal mar intuu istaagey buu yidhi dhegeysta: Ninka wiilkayga diley naxariis uga baryi maaye indhaha uun iisaara anaa ka daba geyne, ama iisoo geed fadhiisiya isaga waa Illaahay iyo beeshiisaba. Meeshi waa lagu kala yaacay markuu odaygu hadalka yidhi.
Dadkii maanta argagixisadu Xamar Ku dishey waxay dilka dadkaa Ku raali gelineyeen Illaah la sheego inuu xagga sare fadhiyo, waxay adeegsanayeen kutub Carbeed oo bannaynaysa daadinta dhiiga dadkaa masaakiinta ah. Hadii aad aaminsantahay in Illaahay jiro, waxaad sidoo kalena aaminsantahay habaar qabahaasi inuu qorsheeyey ama qoray inay dadkaasi dhintaan, halkaa Ku dhintaan, xiligaana dhintaan welibana ay gacanta argagixisadaa Ku dhintaan. Argagixisadu markay weerarkan soo qaadayeen waxay Illaahooda ka baryeen inuu hawsha u fudaydiyo.
Hadaba ma gar baa in dhiiga dadkaa masaakinta ah ciddii daadisay looga baryo naxariis? Illaaha aad aaminsantahay ma badbaadin kari waayey dadkaa la diley? Aniga waxaa ila quman in aan cidna loo baryin. Si dhibkaas aan uga nasano waxaan Ku talin lahaa in la dumiyo meelaha lagu barto argagixisanimada, kutubaha Carbeed ee xagjirnimada laga barto la mamnuuco goobaha lagu faafiyana la xiro.
Waa ka xumahay Geerida weriye Cawil Daahir ee ay maantu dad qalatadu ku dishay isaga iyo maato kaleba magaalda Muqdisho.
Dhaqankii hore ee soomaalida wadaaddadu sida badan khayr bay ahaayeen oo ma ay jirin wadaaddada xunxun ee maanta dadka caaya, dila, addimada ka jara oo gaaleeyaa.Wadaaddadu saddex nooc bay ahaayeen. Kow macallin quraan oo dhibta ugu badan ee uu geystaa ay ahayd in uu carruurta jirdilo midkoodii quraanka si fiican u baran waaya ama dowdarnimo kale sameeya, waxa uuna macallinku heli jirey xoolo...
Waxaa dalka Lubnaan magaalada Bayruud joogta haweeney weliyad saalixad ah ah oo gaartey darajada ”Caarifad”, waxa ayna cuntaa kalluuun ceeriin keli ah oo cuntada kale xagga Rabbi baa laga soomiyey, waxa ayna cabtaa biyo iyo khamri adag. Dabcan qofkii caarifnimo gaara khamrigu xalaal buu u yahay, waxa ayna sheegtay in biirka iyo wayntu aysan darajada ay gaartey u habboonayn in kasta oo ay xalaal u...
W/Q: Khaled Hassan 28th December 2018